Shiinaha HCG Uurka Tijaabada Warshadda Dhexe iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kibir
1.Hal Hal Talaabo Baaritaanka Uurka ee HCG
Faahfaahinta 3.0mm 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm
Hore: Kasetka Tijaabada Uurka HCG
Xiga: Marinka Baaritaanka Uurka ee HCG
1) Ka saar usha tijaabada boorsada xaashida
2) Ka saar furka si aad u kashifto caarada wax nuugaysa
3) U qabo suulka qabashada suulka iyadoo caarada nuugeysa ee u muuqata hoos u sii jeeda. Kaadi kaadi caarada nuugaysa kaliya ilaa ay si fiican uga qoyan tahay.
4) Ku dheji tijaabada sagxad dusha sare ah oo daaqadaha dusha sare inta aad sugeyso natiijada baaritaanka. Akhri natiijada hal ilaa shan daqiiqo .HADAD FAHRIN NATIIJADA KA DIB 5 DAQIIQO.
5) Tuur aaladda tijaabada ka dib isticmaal keli ah qashin qubka.